Author: Narn Fauk
Wanti kana calaqqisu boodana dabree maali? Lachuu saanii bara tti Gadaarra turan. Eega Affaarootnifi Saahootni naannoo amma jiran keessa jiraachuu jalqabanii ykn, isaanumatti aananii godaananii qubacuun waan malu. Gochuma gara-jabummaa kana fakkaatuun lubbuunsaa kan badde, hayyuu, qaroofi oromok Hayila Maaram Gammadaas waan nutti dhaame qaba.
Qoondaaloota Gadaa aangoo qabatan sirnaan muudu, eeybisu.
Aangoo polotikaa keessatti paartii tokko tahu. Boorana keessatti ilmaan Dooriiwwaniifi warra Gadaati. Bakka warrii Gadaa itti murtii seeraa kennan, dubbii gosaa ilaalanfi marii godhanitti argamanii irraa baratu. Achi keessaa bahee gosoota hafniifiis Qaalluu tahu. Mootummooleen habashaa darban Oromoo cabsuuf jecha meeshaalee waraanaa, ogeessotaafi loltoota waliin biyyoota Awurooppaa adda addaa irraa kadhachuun Oromoo irratti duulaa akka turan seenaan hinhaalle.
Raabni isaa yeroosii Yaayyaa Gulleelee jedhama ture. Kanaaf amantiifi aadaan tokkummaa akka qaban ifaadha. Malaa Saggad oliifi gad fiigutti yeroo isaa fixe. Ituu keessatti — Doorii Raaba-dorii jedhamu. Kanaafiis aangoo polotikaa keessaa warraa qooda fudhachuu hin dandeenyeedha. Tuulama keessatti — Dabballee jedhamu.
Akka aadaan sirna kanaa hin dabnefi seerriifi heerri sirnichaa hin banne qaceelcha. Jireenyi dhala namaa walitti hidhaataadha. Harkisanis, gadi lakkisanis firiin isaa tokkuma.
Osoo gaarri, hoqiifi hallayyaan hinjiru tahee, namni hafu hinjiru jedhaa ture barreeysaan Habashaa Alaqaa Atsimeen. Dalagaan isaanii warra Gadooman gorsuu, qacheelchuu, maandhaa isaanii kan tahan gorsuu, leenjisuufi barsiisuudha.
Afaan Amaaraatti dawwee jechun, dhukkuba lamxii jechuudha Muudana: Haa tahuu malee, warri keessaa gurguddaa tahan nijiru: Akkuma hawaasni sun dagaaguun hangafaafi quxxusuun ibidda, manaafi gosa keessattiis hojiirra seenza.
Ituu keessatti — Goobam jedhamu. Amantii sirna gadaa Amaantiin Gadaa ummanni qabaatu keessaa tokko waan sirna Gadaa keessatti hojjetaman aadaa tahee qaama Oromootaa akka ture olitti kaafneerra. Fakkeenyaaf, Gidaadaafi Gabra naannaa kan jedhaman ayyaana carraa gadheeti.
Kanneen utuu kana godhanii, yeroo yerotti sseenaa Qaalluu muudu. Akkaataan polotikaa sirnichaas uunkaa jireenyya hawaasa Oromootti hidhamee jira. Ituu keessatti Raaba jedhama. Ituu keessatti Raaba doorii jedhamu.
Ambulance refused to address the elderly despite the sit-4 days. Eegaa, walumaagalatti dalagaan Qaalluu inni tokko namaafi waaqa walqunnamsiisuu akka tahefi jireenyi hafuura Oromootaa maal akka fakkaatu ilaalleerra. Aadaa jiran keessaahiis amantiin hordafamaa ture, sirnicha utubee kan jabeesse dha.
Sirna Gadaa keessattiis ummanni Oromoo aadaa walii galatti bifa armaan olii qabaatu akka qabu, aadaa kanarraahiis qaroomni ummata Oromoo kalandara mataa isaa qabaachutti akka geesse hubanna. Kun hawaasa Oromoo keessaa, bakka gargaraatti maqaa adda addaa qabata. Tuulam keessatti — Foollee jedhamu.